Aterineto ambany fikoriana, fanantenana ambony nirariana: Fandraisana anjara nomerika tamin’ny fifidianana tao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2015 8:01 GMT
Fahatapahan'ny aterineto tamin'ny fifidianana parlemantera tao Venezoelà tamin'ny 6 desambra 2015. Navoakan'ny ONG Acceso Libre hifarimbonana tao amin'ny Open Street Maps.
Nifidy parlemanta vaovao i Venezoela tamin'ny 6 desambra, nampiodina ilay atao hoe kodiarana ara-politika goavana. Tamin'ny fironan'ny mpifidy tanteraka tany amin'ny fanoherana — nahazo ny toerana maro an'isa tanteraka tao amin'ny perlemanta (112 amin'ny 167) ny mpiara-dia nahitana ny antoko afovoany, afovoany havia ary afovoany havanana — heverina hiatrika ny taona mafy amin'ny fiezahana hamerina amin'ny laoniny ny fahaleovantenan'ny rafitra mpanao lalàna very hatry ny fotoana ela ireto avy amin'ny fitarihana vaovao ireto.
Na dia ambany fikoriana aza ny aterineto ary nisy teny antsefatsefany teny ny fahatapahan'ny aterineto, dia noporofoin'ny tranonkala ny lanjany tamin'ny resaka ataon'ny olona sy tamin'ny fivezivezen'ny vaovao momba ireo kandidà, indrindra fa ireo avy amin'ny fanoherana.
Rehefa nihananatona ny fifidianana dia maro ireo natahotra amin'ny fiverenan'ny fahatapahan'ny aterineto nanerana ny firenena izay nitranga vetivety nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013 taorian'ny fahafatesan'i Hugo Chávez. Tsy niverina hatrany amin'izany dingana izany ny tantara, saingy maro ireo toerana nahitana fahatapahana an'aterineto tamin'ny fanjakana 12 farafahakeliny amin'ny fanjakana 24 misy ao amin'ny firenena. Nataon'ny ONG Access Libre andraisan'ny besinimaro anjara ny fametrahana ireny rakitahiry ireny, izay nandraketana izay olana nitranga tamin'ny fidirana amin'ny aterneto nandritra ny faran'ny herinandron'ny fifidianana, ary nifantohana manokana tany amin'ireo fanjakana izay efa manana ny fahazarany manohitra ny antokon'ny fitondrana, tahaka ny tany amin'ny fanjakana any andrefana ao Zulia sy ao Táchira.
Amin'ny fifikiran'ny rafitra iainan'ny fampitam-baovao amin'ny antokon'ny fitondrana, na amin'ny alalan'ny fahazoana ara-stratejika izany, na tsy fahampian'ny taratasy anaovan-gazety na amin'ny fiverenana feno amin'ny sivana fahiny, dia niroso ho sehatra hahatakarana sy handikana eo noho eo ny fahavitrihana ara-piarahamonina sy politika ao amin'ny firenena ny aterineto. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ny tranonkala venezoelana no nanokatra mitalakatrokatroka ireo haba-tranonkala ahitana vaovao isan-karazany, ka nahasolo toerana ireo gazety mahazatra voatery nikatona noho ny tsy fisian'ny taratasy. Nanana anjara toerana mitovy amin'izany ihany koa ny media sosialy. Araka ny napetraky ny mpanao gazety Luis Carlos Díaz indray maka hoe, ny Twitter no “fon'ny rafitra fampitam-baovao” ao Venezuela.
Pikantsary avy amin'ny fantsona nijoro vao haingana tao amin'ny YouTube najoron'ny Unidad Venezolana, fiaraha-mientan'ny fanoherana tafaray, manazava amin'ny olom-pirenena ny maha zava-dehibe ny fahatongavana aloha any amin'ny biraom-pifidianana, isorohana amin'ny halatra anarana.
Nitodika tany amin'ny loharanom-pampitam-baovao nomerika ihany koa ireo politisiana ivelan'ny antokon'ny fitondrana, izay tsy navela hiditra mihitsy amin'ny fampitam-baovaom-panjakana, ahafahany mampiely ny hafany: nitatitra ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fantsona YouTube ny fiaraha-mientan'ny fanoherana (MUD, avy amin'ny fanafohezan'anarana amin'ny teny espaniola), ka misy ny fotoana mandritra ny alahady no mahazo mpijery an'arivony ao anatin'ny fotoana iray io fantsona io, na dia vao najoro andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana monja aza ary nampahafantarina tamin'ny alalan'ny toho-tsofina na bitsibitsika sy ny media sosialy.
Mampiasa ny Periscope, fampihatra fandefasana lahatsary mivantana ihany koa, hampitana hafatra fohy mandritra ny andro sy nandritra ny alina niandrasan'ny mpifidy ny voka-pifidianana ireo mpitarika ara-politika ao amin'ny fanoherana. Nampiasa ny sehatra i Henrique Capriles, governora sady efa nanao kandidà ho filoham-pirenena taloha, hampitana valandresaka ho an'ny mpanao gazety sy handefa mivantana hafa-panantenana sy fahombiazana amin'ny mpijery azy. Notadiavin'ny maro avy eo ny hany fantsona fahitalavitra nomerika tokana andoavam-bola VivoPlay noho ny fitaterany mandritra ny 24 ora ny fifidianana, na dia hita aza fa tsy misy ilain'ny ankamaroan'ny olona ny servisim-pandefasan-dahatsary mivantana, noho ny fahambanian'ny kalitaon'ny tolotra aterineto: manodidina ny 2mbps eo ho eo amin'ny ankapobeny.
Amin'ny fananana ny 61,62%-n'ny mponina an-tserasera sy ny halakin'ny anterineto mihisatra indrindra ao amin'ny kaontinanta, dia taratra fa tena zava-dehibe tokoa ny fahafaha-mifandray amin'ny nomerika ho an'ny Venezoelana hifandaminana, hifampiresahana ary hiarovana ny zony sy ny fahafahany.